"ODP tu harka Oromoo jira malee, Oromoon harka ODP hin jiru. Kichuu
HomeAfaan OromooNews“ODP tu harka Oromoo jira malee, Oromoon harka ODP hin jiru.
Yoo uummataaf hojjenne ni injifanna, kana ta’uu baannaan Oromoon filannoo hedduu qaba.” Minisiter Rayyaa Ittisaa biyyaa Ob. Lammaa Magarsaa
Body language የሰውየዉን ፍት እዩት፦
Weellisaan hojii muuziqaa isaa jaalannnu Jambo Jote Sirba Qeenxee Filatamaa Bara 2019f isa Beelbaa jedhuun Leza Award irratti badhaaffame.
Baquutti akka hin baqaqne
Toyota + Nissan + turumbo scania= Volvo scania😏
Amma Amma waardiyyoota isaatu na mararaa jira dhugaa Waaq
Ibsa Koree Giddu Galeessaa ODP
Koreen Giddu galeessaa ODP waltajjii marii guyyoottan lamaan darban geggeessaa tureen ciminootaafi hanqinoota qabsoo waltajjii irra geenyeefi dhimma keessoo paartichaa irratti gamaaggama gadi fageenya qabu geggeessuudhaan kallattiiwwan rakkoo keessoo furuu dandeessisaniifi qabsoo yeroo itti aanuu milkeessan kaa’uudhaan xumureera.
Haa ta’u malee, raawwii yeroo darbee keessatti gochoonni aadaafi duudhaa bulchiinsa sirna federaalizimii faallessan hedduun qabatamaatti raawwatamaa turaniiru. Gamaaggama waltajjii keenyaatiin akka ilaalletti, qorannoowwan yeroo darban keessa taasifaman akka agarsiisanitti federaalizimiin Itoophiyaa ummattoota hunda karaa haqa-qabeessa kan hin hirmaachifneefi demokraasii dhugaa kan keessatti hin mirkanoofne ta’uu agarsiisaniiru.
Kana malees, faayidaafi dantaan ummataa murna muraasa aangoo mootummaa of harka galchateen qorqamaa kan ture ta’uun isaa beekamaa dha. ODPn hanqinoonni kunneen sirraa’anii sirni federaalizimii sab-daneessaa dhugaan akka lafa qabatuuf qabsoo eegale cimsee kan itti fufun biyya sabaa fi Sab lammooti fi Ummattootni biyya keenyaa bilisummaa, walqixummaa, obulummaa fi badhaadhinaan keesa jiraatan dhugoomsuuf ODPn cimee kan hojjetu ta’uu isaa ibsa.
kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiner Takele Uma Banti Sirna eebba Kitaaba Ida’amuu.
Haasawa Ministirri Muummee
Dr. Abiyyi Ahimad sirna eebba Kitaaba Ida’amuu Galma Barkumeerratti taasiisan.
Fedhii ummata Amaaraa fi Oromoo walitti araarsuun waanuma salphaa warra itti fakkaatutu nu rakkisaa jira. Gaazexessaan OMN Dejene Gutema dhimma ummata Qimaanti irratti yaada irraa fudhachuuf jecha torbaan kana keessa gaafatamaa damee tikaa Bulchiinsa Naannoo Amaaraatti bilbilee ture. Qondaaltichi OMNiif yaada kennuu diduu caalaa wanna inni dubbatetu nama raaja.
“ግድ የለም ይቺ ቀን ታልፋለች/ homaa miti, guyyattiin kun ni dabarti” jedhe. Akka mootummaa naannoo sanaatti miira jarri keessa jiru ibsuuf jechi namicha kanaa ragaa dha. Guyyaan kun ni dabarti jechuun guyyattiin keenya miti jechuu isaanii ibsa. ‘ተረኞች/abbootii dabaree’ isa nuun jedhamu sana garaatti baadhachaa jiraachuu jaraa hima. Guyyaa keenya miti jedhan kana dhabamsiisanii guyyaa keenya ittiin jedhan fidachuuf hawwii qabaachuus ni akeeka. Guyyaa har’aas eebba kitaabaa irratti ”nuti ilmaan Nafxanyaa” jechuun Oromoo tuquu yaadee kan fokkore qaamuma mootummaa kanaati. Egaa jaruma kanatu sobee ‘Maddammar’iif harka dhaha. Kan gowwoomfamaa jiru Oromoo osoo hin taane warra Oromoo keessaa baanee himachaa yaada Oromoo irraa dhufu lagatee didee achi gamu.